::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather गुडिरहेको अत्याधुनिक बसमा भयानक आगो (भिडियोसहित):: Rojgar Manch ::
गुडिरहेको अत्याधुनिक बसमा भयानक आगो (भिडियोसहित)
शनिवार, २०७५ जेष्ठ १२ गते २२:५१
आशिष मल्ल ठकुरी । काठमाडौंबाट डडेल्धुराको लागि छुटेको यात्रुवाहक बसमा गुडिरहेकै अवस्थामा आगो लागेको छ । शुक्रबार कोहलपुरको बासगढी नजिकै उग्रतारा यातायातको बा ४ ख ८४९२ नम्बरको बसमा आगलागी भएको हो ।
ओभरट्याक गर्ने क्रममा बसको अगाडिको चक्कामा लागेको आगो फैलँदा बस पूर्ण रुपमा जलेको छ ।
अगाडिको चक्काबाट लागेको आगोले केही क्षणमा भयानक रुप लिए पनि यात्रु भने सकुशल छन् । बसमा कति यात्रु थिए भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन ।
गाडीमा भएका यात्रुहरुका समान पनि गाडीसँगै जलेका छन् । दमकल समयमा नपुग्दा गाडी पूर्णरुपमा जलेको बताइएको छ ।
नेपालमै पहिलोपटक डडेल्धुराको उग्रतारा सार्वजनिक यातायातले केही महिनाअघि शौचालय र चमेनागृहसहितकोे अत्याधुनिक बस सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
गुडिरहेकै अवस्थामा बसमा कमै मात्र आगलागी हुन्छ । यसअघि गत माघ २४ गते काभ्रेको धुलिखेलमा पनि गुडिरहेकै अवस्थामा बसमा आगो सल्केको थियो । बनेपाबाट भकुण्डेबेंसीतर्फ जाँदै गरेको हिमाल तराई यातायातको बा ३ ख ३२७० नम्बरको बसमा सल्केको आगोले बस क्षतिग्रस्त भए पनि यात्रु भने जोगिन सफल भएका थिए ।
त्यसैगरी, ०७३ वैशाख १८ गते नेपालगञ्जबाट दाङको तुलसीपुरतर्फ जाँदै गरेको रा १ ख ६९५ नम्बरको यात्रुवाहक बसमा पनि आगो सल्केको थियो । तर आगो फैलन नपाउँदै प्रहरी तथा स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका थिए । आगोले जल्दा छतमा राखिएका सात मोटरसाइकल र सामान नष्ट भएका थिए । -अनलाइनखबरबाट
301. एनआरएनको पहिलो चरणको राहत कार्यक्रम ओखलढुंगा पुगेर टुंगियो
302. श्रेष्ठको १५ लाखको राहत बाग्लुङका भुकम्पपीडितलाई
303. एनआरएन ओमानले आकस्मिक सहयोग स्वरुप १२ लाख पठायो
304. एनसीसी कतारद्वारा श्रद्धान्जली सभा आयोजना
305. एक हजार घर बनाइदिने एनआरएनएको घोषणा
306. गोर्खा, लम्जुङ्ग र काभ्रेका भूकम्प पिडितलाई एनआरएन राहत प्याकेज
307. भुकम्प पिडीतलाई राहत बितरण गर्न एनआरएन टोली सिन्धुपाल्चोकतर्फ
308. सामाजिक कार्यमा एनआरएन शर्मा र नायिका थापा
309. गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा म्यादीमा बृद्धाश्रम निर्माण
310. एनआरएन कतारकी सदस्य दाहालको काठमाडौमा सडक दुर्घटनामा निधन
311. पत्रकार महासंघ चितवनलाई एनआरएन कतारका सल्लाहकार शर्माद्धारा आर्थिक सहयोग
312. प्रधानमन्त्रीबाट एनआरएन भवनको शिलान्यास
313. गुरुङ अष्ट्रेलियाकी आठौं धनी महिला
314. वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका महिलालाई उद्यमी बनाउन जोड
315. मोरङको क्लवलाई एनआरएनए उपाध्यक्ष कार्कीको सहयोग
316. एनआरएन भवनका लागि जापानबाट ७२ लाख संकलन
317. एनआरएन भवन निर्माणका लागि मलेसियामा ४६ लाख संकलन
318. एनआरएन कतारका सल्लाहकार शर्माद्धारा चितवनका स्कुल तथा मन्दिरलाई सहयोग
319. नौ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै एनआरएनको ओसियाना क्षेत्रीय वैठक सम्पन्न
320. एनआरएन अध्यक्ष शेष घलेद्धारा १ अर्वको परोपकारी कोषको घोषणा
321. एनआरएनए एनसीसी कतारको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम
322. एनआरएन कुवेतद्धारा नबनियुक्त राजदुत हमालको स्वागत तथा कार्यवाहक राजदुत भट्टराईको विदाई
323. बोर्ड र एनआरएनले अत्याधुनिक सुचना केन्द्र स्थापना गर्ने
324. एनआरएन कतारको १२ औं स्थापना दिवस सम्पन्न
325. पोर्चुगलमा एनआरएन महिला फोरम गठन
Results 406: You are at page 13 of 17